Misoro yenhau, China, Kubvumbi, 14, 2021
Mhuri yeZimbabwe yobatana muJohanesburg mukuonekana nemutumbi waVaElvis Nyathi vakapondwa nekupiswa muSouth Africa svondo rapera.
Dare ramejastiriti muHarare nhasi rapa mutongo wekuti Muzvare Mary Mubaiwa vabhadhare mari inosvika zviuru makumi matanhatu zvemadhora emunyika ZW$60, 000 pamhosva yekutyora mutemo wewanano yavakabatwa nayo vachinzi vaita kuita chikiribidi kuti vachate nemutevedzeri wemutungamiri wenyika VaConstantino Chiwenga vasati vatanga kunetsana.
Tsvakurudzo ichangobva mukuitwa nesangano reZimbabwe Democracy Institute (ZDI) pamusoro pesarudzo dzemaby-election inoratidza kuti paikunda Zanu PF yaikunda pakuru uye paikunda bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change (CCC) raikunda padiki. Tsvakurudzo iyi yakaratidzwawo kuti CCC yakaita zvakanaka musarudzo kudarika MDC Alliance.
Vatendi vechiKristu vofara kusangana kekutanga mumakore maviri munguva yakakosha muchitendero ichi yeEaster sezvo vange vambovhiringidzwa nechirwere cheCovid-19.
Vamwe vabereki kuMashonaland West votatarika kutoresa vana vavo magwaro ekuzvarwa kunyangwe hurumende iri kuti iri kurerutsa hurongwa uhu.
Muchirongwa chedu cheWomens Round Table chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muhupenyu hwavo, nhasi tiri kutarisa kurudziro iri kupihwa nemasangano anorwira kodzero dzemadzimai kuti vanyorese kuvhota pamberi pesarudzo dza2023.